Xildhibaan Cabdirishiid Xidig oo ka hadlay ammaanka magaalada kismaayo – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdirishiid Xidig oo ka hadlay ammaanka magaalada kismaayo
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid ah Xildhibaanadda Golaha Shacab Baarlamaanka Soomaaliya islamarkaana sheegtay in uu yahay Madaxweynaha Jubbaland ayaa ka hadlay dhaawacii Magaaladda Kismaayo loogu gaystay Abuukaate Axmed Jaamac Qalyar oo ahaa Guddoomiyihii Golaha Bedbaadada isbedel doonka Jubbaland iyo Nabadoon deegaanka ah.
War qoraal ah oo uu soo dhigay barahiisa Bulshada ayuu ku sheegay Xildhibaan Cabdirashiid Xidig in Weerarka lagu dhaawacay Nabadoonka uu ahaa mid qorshaysan .
“Waa hubaal inuu xidhiidh toosa ka dhexeeyo Khudbadii uu shalay jeediyay Madaxweynihii hore ee Jubbaland iyo toogashada abuukataha, ” ayuu yiri Xildhibaan Cabdirashiid Xidig.
Xildhibaan Cabdirashiid Xidig ayaa ka dalbaday Golaha Badbaadada isbedel doonka Jubbaland inay usoo duceeyaan Axmed Jaamac.
Xildhibaan Cabdirashiid Xidig ayaa Wallaaac ka muujiyay xaaladda amni ee Kismaayo isaga oo ugu digay dhamaan dhinacyada Mucaaradka Jubbaland .
Daahir Amiin Jeesow oo sheegay in Axmed Madoobe dacwad laga geeyay maxkamadaha dalka